स्वास्थ्यकर्मीदेखि पत्रकारसम्मको नक्कली परिचयपत्र बनाउने धन्दा : एउटा कार्डको ५०० रुपैयाँ ! « गोर्खाली खबर डटकम
स्वास्थ्यकर्मीदेखि पत्रकारसम्मको नक्कली परिचयपत्र बनाउने धन्दा : एउटा कार्डको ५०० रुपैयाँ !
काठमाडौँ । कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी छ । सरकारले निषेधाज्ञाको बेला स्वास्थ्यकर्मी र पत्रकारलाई हिँड्डुल गर्न कतै रोकतोक गरेको छैन । पत्रकारहरु कार्यालयकै परिचयपत्रले सजिलै हिँड्डुल गर्न पाउँछन् ।
पत्रकारलाई कार्यालयको परिचयपत्रकै आधारमा हिँडडुल गर्न, आवश्यक मानवीय साधनको व्यवस्थापन र अन्य समन्वयात्मक कार्यमा आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गरेर जान पाउने सरकारले नै निर्णय गरेको छ ।